JABEEL (Maanso) - WardheerNews
W.T. Idiris Maxamed Cali
Dave Chappelle, majaajilaystaha Madow ee Maraykanaad, wuxuu qarka u saaran yahay in la faafreebo, hantidiisana bacaadka lagu liso, isagoo jooga dalkiisii hadal-furnaantu u xeerranayd. Netflix ayuu sanadkan, bishii Oktoobar shanteedii ka sii daayay barnaamijkiisii ugu dambeeyay ee ahaa, “Xiraha” – “The Closer”. Wuxuu isku dayay inuu dhaqanka dayrinta (cancel culture) ku soo afjaro.
Maaddaama oo la joogo samankii laabkahadalka, majaajilaystuhu wuxuu ku dadaalay inuu si qosol-qosol ah oo fudud dadka wax ugu sheego. Wuxuu ku arartay, “Ma habboona in qofka qutulyoonkiisa qiilqiil la geliyo”. Wuxuu dabadeed dhalliilay bulshooyinka Labeebka ee Caddaanka ah, isagoo tusaaleeyay siday Madowgii iyo Dumarkiiba uga hororsadeen xuquuqihii ay u soo halgameen.
Waa lagu xoomay, oo Twitter-ka (oo uu yiri, “Meel dhab ah maaha!”) iyo degello kaleba waa loo galay si cumaamadda looga tuuro. Immikadan haddaad magiciisa Google-garayso, hubaal waxa ugu horreeya eed aragtaa waa la dagaallankiisa. Dhaqanka dayrinta ee ku salaysan “Waxaad nacdaba nacabso” ayaa lagala hor tegay. In qudhiisa la dayrsho baa dadka qaarkii ka go’an.
Taase looma dul qaadan karo. Waayo, adba soo qoysaa ka dambaysa, siiba haddaad rabto inaad maanka ka hadasho. [Dave qudhiisu rag la dayrshay buu u dadaalayaa.] Balse waa iga su’aale: laabkahadalku illaa xadkee ayuu ka sii gudbi doonaa, marba haddii diin iyo garaadba ay meesha ka baxaan?
Tixduna waxay ku bilaabmatay:
1. Dirkaba afkaar cillad huursan
2. Jabeel daboolka ka qaadye
3. Ma duul ayaa ka carooday?
4. “Wuxuu ogaan dubbaheenna
5. Waxaannu doonno nin maaga!”
6. Ma is gilgileen durbadiiba?
7. Siday ahayd dunideennu
8. Dorraato tii ka horraysay
9. Xusuuso Luud kuwi diiday!
10. Sidaw xuquuq Dumar fooshay
11. Hortii Madowgu u dooxmay
12. Labeeb Caddaani durduurtay?
13. Jabeel dabuubti wa taase
14. Bal keen waxaad ku durayso
15. Intaadan “Dayrsha!” ku qaylin
16. Dareen garaadku sifaynin
17. Asaanba Diintu hagaajin
18. Degaandeggiisu halkeena?